बालबालिका र युवामा तीव्र संक्रमण दर - Baikalpikkhabar
बालबालिका र युवामा तीव्र संक्रमण दर
काठमाडौँ/ केही हप्ता अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिन थालेको भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ (सिसिएमसी) लाई सिफारिस गर्‍यो।
तर, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा अटेरी गर्दै बन्द गरिएका शिक्षण संस्था पुनः सञ्चालन गर्न शुक्रबार विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो। यस्तै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यलयले संक्रमण देखिएका शिक्षण संस्था एक हप्ताका लागि बन्द गर्नु भन्दै शुक्रबार नै सूचना जरी गरेको थियो।
तर शनिबार दिउँसो बसेको सीसीएमसीको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म शहरी क्षेत्रका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अहिलेको यो अवस्थामा शिक्षण संस्था बन्द गर्नतिर जोड गर्नुको मुख्य कारण बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिले संक्रमण फैलिने ठाउँ विद्यालय देखिएको छ। तत्काल नै विद्यालय बन्द गरिएन भने अवस्था भयावह हुन सक्छ’, डा. अधिकारीले भने।
उनले भने, ‘स्कुल गएका बालबालिकाले मास्क लगाए पनि उनीहरु धेरै जनासँग धुलमिल हुन्छन्। ब्रेकमा सँगै बसेर एक अर्काको खाजा साटासाट गरेर खान्छन्। जसले गर्दा कोही संक्रमित छ भने अरुअरुमा सर्छ। संक्रमित एक जना मात्रै हुदैन। स्कुलमा संक्रमित भएको बच्चाले घरमा अभिभावकलाई समेत सार्छ। अभिभावकबाट अरुमा सर्छ। यसरी संक्रमणले ठूलो रुप लिँदै जान्छ।’
उनी भन्छन्, ‘बालबालिकालाई जति सिकाए पनि उनीहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउदैनन्। सक्दैनन् पनि। स्कुलमा दुरी कायम गरेर बस्न सम्भव पनि छैन। जसले गर्दा संक्रमण उनीहरुमा चाँडो फैलिने हुन्छ। संक्रमणबाट उनीहरुलाई जोगाउन ‘हट स्पट’का शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ।’ तत्कालका लागि शिक्षा भन्दा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएको डा. अधिकारीले बताए।
यस्तै संक्रमण दर बढ्दै जाँदा सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, रात्रि व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल लगायत बन्द गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, क्लबहरुमा भीड देखिन थालेको छ भने शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित भइरहेका छन्।
यस्तै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ८३ हजार ६ सय ५८ पुगेको छ जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ५ सय ४५ हरेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार शनिबारसम्म २ लाख ७५ हजार ३८ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
मङ्गलबार, ०७ बैशाख, २०७८, बिहानको ०८:०१ बजे